Dabaal-dagga Aasaaskii Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo ka Socda Muqdisho - | Sagal Radio Services
Dabaal-dagga Aasaaskii Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo ka Socda Muqdisho -
Sagal Radio Services • News Report • December 20, 2014
Dabaal-deg lagu maamuusayo 71-sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskii ciidamada booliiska Somalia oo ku beegan maanta oo ah 20 December ayaa ka socota magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.
Xuskan ayaa waxaa ka qaybgalay saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh iyo saraakiil kale oo ciidanka booliiska ka tirsan, iyadoo dabaal-dagga ay kusoo bandhigi doonaa gaaddo-ka-ciyaar ay sameyn doonaan ciidamada booliiska Somalia oo wiilal iyo hablo isugu jira.
Madaxwehnaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu munaasabadda ka jeediyo khudbad uu kaga hadlayo waxqabadka ciidamada booliiska iyo waxtarkooda, iyadoo ay noqonayso markii saddexaad oo la xuso aasaaska booliiska, tan iyo markii madaxweyne Xasan loo doortay xilka.
Goobta ay munaasabaddu ka dhacayso oo ah dugsiga tababarka booliiska ee Jen. Kaahiye ayaa ammaankeeda aad loo adkeeyay, iyadoo la xiray jidadka soo gala oo dhan, si looga hortago falal amni oo dhan inta xuska uu socdo.
Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa la aasaasay sannadkii 1943-kii, xilligaa oo uu dalku ku jiray gumeysi, waxaana ciidankan uu ka shaqeeya amaanka magaalooyinka iyo deegaannada kale ee ay shacabku ku nool yihiin.
Booliiska ayaa la sheegaa inay yihiin saaxiibka bulshada, waxaana saldhigyo ay ku leeyihiin xaafadaha kala duwan ee Muqdisho iyo degmooyinka gobollada dalka si ay amniga shacabka u ilaaliyaan.